ရှေးအရင်ကထက် ထူးနေတဲ့ဆူးလေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရှေးအရင်ကထက် ထူးနေတဲ့ဆူးလေ
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 8, 2011 in Photography | 20 comments
ဟိုအရင်က ဆူးလေစေတီတော်ရဲ့ပုံတော်ကတော့ ကျနော်ရိုက်ထားတာမရှိပါဘူး။
ဆူးလေစေတီကို ကျနော်တို့က ကပ်ကျော်ဘုရားလို့လဲအမည်တပ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆူးလေဘုရားနားသာဖြတ်သွားတယ် တက်မဖူးဖြစ်တာများလို့ပါ။
အရင်ကဆိုရင်ဆူးလေဘုရားက လမ်းအလည်ခေါင်မှာ ထီးထီးကြီး မြင့်မြင့်မားမား
ဟိုအရင် ရန်ကုန်ရောက်စက ကျနော်ဘယ်သွားသွား ဆူးလေကို လာပြီးမှသွားတာလေးကိုလဲပြန်သတိရမိပါတယ်။
ကျနော်ဆူးလေးကို ဘဲမူတည်ပြီး သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး။
တစ်ရက် ချင်းချောင်းရိပ်သာနား ကို လူကြုံပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်လေးသွားပေးပါတယ်။
နောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက သူငယ်ချင်းဆီသွားမယ်စိတ်ကူးတော့ ဆူးလေကို ဘတ်စ်ကားပြန်စီးလာပါတယ်။
နောက်ဆူးလေရောက်မှ ဘတ်စကားစီးပြီး တက္ကသိုလ်ထဲကိုပြန်သွားပါတယ်။
လေးပေါက်က တပတ်လောက်ပဲ နေလို့ … တလလောက်သာ နေလျှင် မျက်စိမှိတ်ပြီးတောင် သွားတတ်ဦးမှာ …
ဆူးလေစေတီက..ရန်ကုန်ရဲ့ ဗဟိုအလယ်ခေါင်လို့ သိဖူးတယ်..။
ဆိုတော့.. ၆မိုင်ခွဲ.. ၈မိုင် စသဖြင့်တွက်ကြတာ ဆူးလှေကနေလို့ဆိုတာပဲ..။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ…။
ပြောရရင်.. ဆူးလေအ၀ိုင်းပါတ်က… ပန်းပုအနုပညာတွေမှာ.. ကဒေါင်းကို လုပ်မဲ့သဘောရှိပေမဲ့..အကြောင်းတခုခုကြောင့် တန်းလန်းကြီးရပ်နေတဲ့..ပန်းရံ ဟန်ကိုလည်း ပြန်သတိရမိတယ်..။
သူများက မှားနေတယ်ပြောမှ ပြန်ပြီး ကားဂိတ်ဘက်သွားရတာပါ။
ဆူးလေဘုရားက ကပ်ကျော်ဘုရားဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်… ။ လူနည်းတော့ ဖိနပ်ခိုးမဲ့လူချည်း ချောင်းနေတာ … ဖိနပ်မအပ်မိလျှင် ချိုင်းကြားသာညှပ်ထားပေတော့ … မဟုတ်လျှင် ပျောက်ဖို့ တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းသေချာတယ်
ရှေးအရင်ကထက် ထူးနေတဲ့ဆူး လို့ ဖတ်မိပြီး ဘာများလဲလို့..။ ဆူး ဘာတွေများထူထူးခြားခြား လုပ်နေပြီလဲလို့..။
အနော်လည်း ရန်ကုန်ရောက် ရင် ဆူးလေ မရောက်ဖြစ်ဖူး … ကပ်ကပ်ပြီးကျော်သွားတာ ….
ဘုရား ဘုရား ဘုရား.. ဆူးလေ ဘုရားပါ..
ဆူးလေ နားမှာ ကားတွေ အများကြီးပဲ.. လူတွေလည်း အများကြီးပဲ..
၁၀တန်းလောက်တုန်းကဆို အဲဒီ ၀န်းကျင်မှာ တနေ့ တနေ့ လမ်းလျှောက်နေရတာ ဟိုကျူရှင်က ဆင်း ဒီကျူရှင် ပြေးနဲ့ လမ်းမှာ ဘာရှိမှန်းတောင် သေချာ မကြည့်မိဘူး။
ဘုရားနောက်ခံ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးကြီးက ၁၉၉၇အာရှစီးပွားပျက်ကပ်တုန်းက တန်းလန်းကြီးရပ်သွားတဲ့ ဆိုဖီတယ်ဟိုတယ်ထင်တယ်။ ဦးပေါက်ကသာ ထူးတယ်ပြောတယ်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ဘုရားဘက်စုံမွမ်းမံပြီးကထဲက အနေအထားအတိုင်းပဲ၊ ဘာမှမပြောင်းဘူး။
ဆူးလေ ဘုရားကို ကပ်ကျော် ဘုရားလို့ ပြောကြတာကြားဖူးတယ် … တကယ်လည်း ဟုတ်တာပဲ ။
၇န်ကုန်မြို့ရဲ့ အလည်ခေါင် ဖြစ်ပြီး အဲဒီ့ကနေ စပြီး တိုင်းတာတာလို့ ပြောတာလည်း ပြောကြတယ် …. ပြိးတော့ ဆူးလေ ဘိုးဘိုးကြီးက ရန်ကုန်တမြို့လုံးကို ပိုင်တယ်လို လည်း ဆိုကြပါသေးတယ် …..
နယ်က လာတဲ့ အဒေါ်တယောက်ကျပြန်တော့ ရန်ကုန်မှာ လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ခင် ဆူးလေ ဘုရားကို သွားပြီး ဘိုးဘိုးကြီးဆီ အရင် သွားဆုတောင်းတယ် ။
ရွှေတိဂုံစေတီမှာ ကလေးချီထားတဲ့ သိကြားမင်းလိုလို အရုပ်မှာ သားဆုပန်နိုင်တယ်ပြောကြတယ်..။
ဘေးက နောက်တရုပ်က.. ပန်းလားကြာဖူးလားမသိကိုင်ထားတာ… အဲဒီမှာက.. သမီးဆုပန်နိုင်တယ်ပြောတယ်..။
သေချာတာကတော့.. ယောက်ျားဖြစ်လို့ ကလေးလိုချင်ရင်.. မိန်းမဆီမှာဆုပန်ပါ..။
မိန်းမဆိုရင်တော့.. ယောက်ျားဆီမှာ ပန်ပေါ့..။ ဆုပန်ပြီး ထိုင်နေရင် ဘာမှရမှာမဟုတ်.. လက်တွေ့ကျကျလည်း ကြိုးစားပါ..။
ဒါတောင်မရသေးရင်.. ဆရာဝန်ဆီမှာ ဆေးစစ်လိုက်ပါဦး..။
ရွှေတိဂုံမှာ သားဆုပန်တဲ့နေရာက မြောက်ဖက်မုဒ်နားမှာ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်တိုင်နဲ့ အင်္ဂါဂြိုင်တိုင်ကြားမှာရှိတယ်။ နတ်ရုပ်တရုပ်က ကြာပန်းကိုင်ထားပြီး တရုပ်ကတော့ ကလေးလေးပွေ့ထားတယ်။ ဆူးလေမှာတော့ မပြောတတ်ဘူး။ သိတာလေး ၀င်ရွှီးတာ။
ဦးပေါက်ကသာ ထူးတယ်ပြောတယ်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ဘုရားဘက်စုံမွမ်းမံပြီးကထဲက အနေအထားအတိုင်းပဲ၊ ဘာမှမပြောင်းဘူး။
ထူးတာပေါ့ တူလေးရဲ့ ဦးပေါက်က 1983 နောက်ရန်ကုန်မရောက်တော့ လေးပေါက် က အဲဒါကြီးကို မမြင်ဘူး ဘူးလကွာ
ဆူးလေ ကို space လေး ခြားလိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမယ် ထင်တယ်။
ဆိုတော့.. ၆မိုင်ခွဲ.. ၈မိုင် စသဖြင့်တွက်ကြတာ ဆူးလှေကနေလို့ဆိုတာပဲ..။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ…
အဲဒါက ဆူးလေးကို မူတည်တာ မဟုတ်ဘူး ကိုကိုကိုင်ရ
မြို့တော်ခန်းမ ကိုမူတည်ပြီး ယူထားတာပါ။
ရန်ကုန်နဲ့မန်းလေးအကွာအဝေးသည် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမနဲ့ မန်လေးမြို့တော်ခန်းမ ကြားနှစ်ခုအကွာအဝေးလို့ ကြားဘူးပါတယ်။
သေချာတာကတော့အိမ်ဈေးမြေဈေးတော့ ဆူးလေဘုရားအကွာဝေးနဲ့ တွက်တာ(အရင်က)ကြားဘူးတယ်
ကျွန်မက သဂျီးဘက်ကလိုက်ပါသည်။ရန်ကုန်ရဲ့ မိုင်တိုင်ကို ဆူးလေမှတိုင်းသည်ဟုသိထားပါသည်။
မြို့တော်ခန်းမက ဆူးလေဘုရားထက် နောက်ကျပါသည်။
နှစ်ဖက်စလုံး မှားပါသည်။ အဖြေအမှန်မှာ အင်ဂျင်နီယာ ပေကြိုးစချတဲ့ နေရာဖြစ်၏။ အဲဒီအချိန်က ရန်ကုန်မြို့တည်ဆောက်သူများသည် မျက်နှာဖြူများဖြစ်လို့ ဆူးလေဘုရားအနီးက ဧမာနွေလ အမည်ရှိ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
မှတ်ချက်။ ပညာရှိနှင့်ပေါင်းလျင် ပညာရမည်၊ သဂျီးနှင့်ပေါင်းလျင် အကုသိုလ်ရမည်၊ သဂျီးကို အတိုက်အခံပြုသူများနှင့်ပေါင်းလျင် တုတ်စာရမည်။ ကြိုက်ရာရွေးလော့ ငါ့ရှင်… :cool: